Ugbu A Amatala M Chineke M Na-efe
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ndebele Norwegian Ossetian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
AKỤKỌ MARIETA MANUEL BACUDIO KỌRỌ
Otu pastọ e kwuru na o nwere ikike e ji agwọ ọrịa bịara ememme e ji chie m pastọ. Ozugbo o bitụrụ m aka, adara m n’ala tụbọọ. Echere m na ọ bụ mmụọ nsọ kwadara m. Mgbe m ghọtara onwe m, ọ bịara dị m ka m̀ nwetala ihe m chọrọ, ya bụ, ikike e ji agwọ ọrịa. Gịnị kpatara ihe ahụ mere n’ụbọchị ahụ, gịnịkwa mechara mee? Tupu mụ azaa ajụjụ ndị ahụ, ka m kọgodị ihe ndị mere mgbe m na-etolite.
A MỤRỤ M n’obodo Ilokos Note, nke dị na Filipinz, n’abalị iri n’ọnwa Disemba, n’afọ 1968. Papa m na mama m mụrụ ụmụ iri, abụ m nwa nke asaa. Anyị bụ ndị Katọlik otú ọtụtụ ndị bi na Filipinz bụkwa. Mgbe m gachara ụlọ akwụkwọ sekọndrị n’afọ 1986, achọrọ m ịbụ nọọsụ. Ma, o nweghị isi n’ihi na m rịara nnukwu ọrịa mgbe ahụ. Echedịrị m na m ga-anwụ n’ọrịa ahụ. N’ihi ya, m rịọrọ Chineke ka o nyere m aka, gwakwa ya na ọ bụrụ na m gbakee, m ga-eji ndụ m niile jeere ya ozi.
Mgbe m gbakere, echetara m nkwa ahụ m kwere Chineke. Ọ bụ ya mere m ji banye n’ụlọ akwụkwọ ndị pastọ n’ọnwa Jun, n’afọ 1991. Otu n’ime ihe ndị a na-akụziri anyị n’ụlọ akwụkwọ ahụ bụ otú mmadụ ga-esi enweta “onyinye mmụọ nsọ.” M chọkwara inweta ikike e ji agwọ ọrịa. A kụziiri anyị na ikpe ekpere na ibu ọnụ ga-eme ka anyị nweta ikike ahụ. Otu ụbọchị, mgbe m chọrọ igosi ụmụ akwụkwọ ibe m na enwetala m “onyinye mmụọ nsọ” ahụ, m zooro ezoro gaa gee ntị n’ekpere otu nwa klas anyị na-ekpe n’oge ekpere. Mgbe ọ fọrọ obere ka o kpechaa, m mere ngwa ngwa gaghachi n’ebe m nọ na-ekpe ekpere nke m. Mgbe o kpechara, agwara m ya ihe niile o kpere n’ekpere ahụ, ya echee na enwetala m “onyinye mmụọ nsọ” ahụ.
N’oge ahụ m nọ n’ụlọ akwụkwọ, e nwere ọtụtụ ihe na-agbagwoju m anya. Dị ka ihe atụ, Matiu 6:9 kwuru banyere “Nna” anyị nke bi n’eluigwe na ido “aha” ya nsọ. M na-ajụ ndị nkụzi anyị ajụjụ ndị dị ka “Ònye bụ Nna ahụ Jizọs kpọrọ aha n’amaokwu a?” “Oleekwa onye a ga-edo aha ya nsọ?” Ọtụtụ mgbe, ihe ndị na-akụziri anyị ihe na-aza anaghị edo m anya. Ha na-akụziri anyị banyere Atọ n’Ime Otu, ha na-asịkwa na ọ bụ ihe omimi. Ọ naghị edo m anya. N’agbanyeghị nke ahụ, anọgidere m n’ụlọ akwụkwọ ahụ.
Otú Mụ na Ndịàmà Jehova Si Mata
N’ụlọ akwụkwọ ahụ, a kụziiri anyị na okpukpe Ndịàmà Jehova bụ okpukpe ụgha kacha njọ e nwere. A gwakwara anyị na ha bụ ndị na-emegide Kraịst. Nke a mere ka m kpọọ ha asị.
Mgbe m nọ n’afọ nke abụọ n’ụlọ akwụkwọ ahụ, m lara ịga hụ ndị mụrụ m mgbe anyị nọ ezumike. Nwanne m nwaanyị aha ya bụ Carmen nụrụ na m lọtara, ya alọtakwa. N’oge ahụ, Carmen aghọọlarị Onyeàmà Jehova e mere baptizim, na-ekwusakwa ozi ọma oge niile. Mgbe ọ gbalịrị ka ọ kụziere m banyere Chineke, iwe were m, mụ agwa ya, sị: “Amarala m Chineke m na-efe!” M gwakasịrị ya okwu ahụ́ ma kwapụ ya n’ụzọ, enyeghịkwa m ya ohere ọzọ ịgwa m okwu.
Mgbe m laghachiri n’ụlọ akwụkwọ, Carmen ziteere m otu akwụkwọ aha ya bụ Ì Kwesịrị Ikwere n’Atọ n’Ime Otu? * M fụkọtara ya ozugbo tụba ya n’ọkụ. M ka na-ewere Carmen iwe.
Otú M Si Ghọọ Pastọ
Mgbe m ka nọ n’ụlọ akwụkwọ ahụ, e nwere ndị m kpọbatara na chọọchị anyị. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ mgbe mama m na otu nwanne m nwoke batakwara na chọọchị ahụ.
N’ọnwa Mach n’afọ 1994, m gụchara akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ ndị pastọ ahụ. Dị ka m kwuru ná mmalite, otu pastọ a ma ama bịara ememme e ji chie anyị pastọ. Anyị niile ndị gụchara akwụkwọ chọrọ ịnọ ya nso n’ihi na anyị kweere na o nwere onyinye ịgwọ ọrịa. Anyị gakwuuru ya n’elu ọlta, soro ya na-awụgharị ma na-akụ aka mgbe a na-akụ egwú. Onye ọ bụla o bitụrụ aka, ya adaa, anyị chekwara na ọ bụ “mmụọ nsọ na-akwada anyị.” Mgbe o bitụrụ m aka, adara m n’ala tụbọọ. Mgbe m ghọtara onwe m, ezigbo ụjọ tụrụ m, ma ọ bịara dị m ka m̀ nwetala ikike ahụ e ji agwọ ọrịa. N’ihi ya, obi tọrọ m ụtọ.
Obere oge ihe a mechara, m ji ikike ahụ gwọọ otu nwatakịrị oké ahụ́ ọkụ ji. Mgbe m kpeere ya ekpere, ọsụsọ malitere ịgba ya, oké ahụ́ ọkụ ahụ ji ya akwụsịkwa. Ọ bụ mgbe ahụ ka m bịara chee na o ruola mgbe m ga-emezu nkwa ahụ m kwere Chineke. N’agbanyeghị nke ahụ, ọ na-adị m ka ò nwere ihe kọrọ m. N’ime obi m, ekweere m na e nwere naanị otu Chineke, ma amachaghị m onye ọ bụ. Ọ na-adịkwa m ka ọtụtụ ihe a na-akụzi na chọọchị anyị abụghị eziokwu.
Ihe Ndị Mere Ka M Gbanwee Echiche M
N’oge ahụ, m bịara kpọkwuo Ndịàmà Jehova asị. Mgbe ọ bụla m hụrụ akwụkwọ ha, m na-akpọ ya ọkụ. Ma otu ihe m na-atụghị anya ya mere. O juru m anya mgbe m chọpụtara na mama m akwụsịla ịga chọọchị anyị. Carmen amalitela ịkụziri ya Baịbụl! Ihe a nwanne m mere were m ezigbo iwe.
Ma otu ụbọchị, m hụrụ otu Teta! n’ụlọ mama m. Ọ bụrụ mgbe mbụ, m gaara agba ya ọkụ. Ma ebe ọ bụ na m chọrọ ịmata ihe mama m na-agụta n’akwụkwọ ahụ, m sapewere ya. Ka m na-asape ya, ahụrụ m otu isiokwu nke kọrọ banyere otu onye nke na-ejighị chọọchị ya egwuri egwu, ma mgbe ọ malitere ịgụ akwụkwọ Ndịàmà Jehova nakwa Baịbụl, ọ bịara doo ya anya na nkụzi Atọ n’Ime Otu na ọkụ mmụọ esighị na Baịbụl. Ọ ghọtakwara na ọ bụghị eziokwu na mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ. Ihe a m gụrụ ruru m n’obi. M nọ kemgbe na-achọ otú m ga-esi aghọta ihe ndị ahụ. Malite mgbe ahụ gawa, m chọwara otú m ga-esi aghọta ihe Baịbụl na-akụzi.
M gụkwara otu Teta! ọzọ nke kọrọ otú otu onye aṅụrụma nke na-aṅụkwa ọgwụ ọjọọ si kwụsị ịṅụ oké mmanya na ọgwụ ọjọọ mgbe ọ malitere ịmụ Baịbụl. Nke a mere ka m malite ịgụ akwụkwọ Ndịàmà Jehova ndị ọzọ. Ahụrụ m otu akwụkwọ aha ya bụ Aha Nsọ Ahụ Nke Ga-adịru Ebighị Ebi. * Mgbe m gụrụ akwụkwọ ahụ, m mụtara na aha Chineke bụ Jehova. Obi tọrọ m ụtọ na m matala onye ezi Chineke bụ!—Diuterọnọmi 4:39; Jeremaya 10:10.
M nọgidere na-agụ akwụkwọ Ndịàmà Jehova na nzuzo, na-amụtakwa ọtụtụ ihe na Baịbụl. Dị ka ihe atụ, mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ ndị pastọ, a kụziiri anyị na Jizọs bụ Chineke, ma m si na Baịbụl mụta na Jizọs bụ “Ọkpara nke Chineke dị ndụ.”—Matiu 16:15, 16.
Agbanwere M Obi M
N’oge ọzọ m hụrụ Carmen, o juru ya anya mgbe m gwara ya ka o nye m akwụkwọ ahụ a na-akpọ Aha Nsọ Ahụ Nke Ga-adịru Ebighị Ebi na akwụkwọ ndị ọzọ Ndịàmà Jehova bipụtara. N’agbanyeghị na m gụrụ akwụkwọ ọtụtụ afọ n’ụlọ akwụkwọ ndị pastọ, a kụzighịrị m eziokwu n’ebe ahụ. Adị m ka onye ìsì. Obi na-atọzi m ụtọ ugbu a n’ihi ihe ndị m na-amụta na Baịbụl. M bịara ghọta na ihe a Jizọs kwuru bụ eziokwu: “Unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.” (Jọn 8:32) Eziokwu ahụ m na-amụta malitere ịgbanwe ndụ m.
N’oge ahụ, m chere na m nwere ike izoro ezoro na-efe Jehova Chineke ma bụrụkwa pastọ. Ma n’oge na-adịghị anya, m chọpụtara na ọ na-esiri m ike ịkụzi ọtụtụ ihe a na-akụzi na chọọchị anyị. N’agbanyeghị nke ahụ, e nwere ihe ndị nọ na-enye m nsogbu n’obi. M nọ na-eche otú m ga-esi na-akpata ego ma m kwụsị ịbụ pastọ. Ọ bụrụkwa na m ghọọ Onyeàmà Jehova, ihere ga-emekwa ndị chọọchị anyị na otu pastọ ha aghọọla Onyeàmà Jehova! N’ihi ya, m nọgidere na chọọchị ahụ, ma akwụsịrị m ịkụzi nkụzi ụgha ndị a na-akụzi na chọọchị anyị.
Mgbe ọzọ m hụrụ Carmen, ọ gwara m ka m gaa ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ebe ọ bụ na m na-agakarị ahụ ndị isi chọọchị anyị n’obodo a na-akpọ Lawag, otu ụbọchị, m zooro ezoro gaa chọta otu Ụlọ Nzukọ Alaeze Ndịàmà Jehova dị n’ebe ahụ. Mgbe m ruru, e gosiri m otu Onyeàmà Jehova. Aha ya bụ Alma Preciosa Villarin, ma ọtụtụ ndị na-akpọ ya “Precious.” Ọ na-ekwusa ozi ọma oge niile. Ọ bụ eziokwu na obi akachabeghị m ịbụ Onyeàmà Jehova, m kwetara ka ọ malite ịkụziri m Baịbụl.
Nwanne m nwaanyị ji ndidi na-akụziri m Baịbụl kemgbe. Abịakwara m hụ na Precious na-emekwa ka nwanne m, o ji ndidi na-eso m. O nyeere m aka ịghọta Baịbụl nke ọma n’agbanyeghị na iwe na-ejide m mgbe ụfọdụ, mụ arụwa ya ụka ma ọ bụkwanụ bawa mba ma na-esi ọnwụ na ihe ụfọdụ a kụzibuuru m bụ eziokwu. Àgwà ọma Precious na Ndịàmà Jehova ndị ọzọ na-akpaso m na otú ha si jiri obiọma na-enyere m aka ruru m n’obi. Nke a mere ka m kpebie ife Jehova.
N’ọnwa Julaị n’afọ 1995, m bịara ghọta na ọ bụrụ na m chọrọ ife Jehova, m ga-akwụsịrịrị ịbụ pastọ. Ọ̀ bụ maka gịnị? Ọ bụ maka na Mkpughe 18:4 kwuru banyere okpukpe ụgha, sị: “Ndị nke m, sinụ n’ime ya pụta, ma ọ bụrụ na unu achọghị iso ya kere òkè ná mmehie ya, ma ọ bụrụkwa na unu achọghị ịnata ụfọdụ n’ime ihe otiti ya.” Oleekwanụ otú m ga-esi na-akpata ego? Amụtara m ná Ndị Hibru 13:5 na ọ bụrụ na anyị emee uche Chineke, Chineke ga-emezu nkwa o kwere anyị nke bụ́: “M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.”
Ọ bụ eziokwu na papa m na nwanne m nwoke achọtụdịghị ka m kwụsị ịbụ pastọ, ma m katara obi gaa kpọọ ihe niile m ji arụ ọrụ pastọ ọkụ mgbe ọ fọrọ izu abụọ ka e mee m baptizim. Mgbe m kpọchara ihe ndị ahụ ọkụ, achọpụtara m na ike ahụ e nyere m adịkwaghị. Tupu mgbe ahụ, ọ na-abụ m hiwe ụra, ya adị m ka è nwere ihe na-anyịgide m. Ma ihe ahụ kwụsịkwara ime m. O nwekwara ihe dị inyoghị inyoghị m na-ahụbu na windo ụlọ m, ma anaghịzi m ahụ ya. Ịmụ Baịbụl emeela ka m mata na onyinye mmụọ nsọ ndị mmadụ na-ekwu na ha nwere taa, dị ka ikike e ji agwọ ọrịa, esighị n’aka Chineke, kama o si n’aka ndị mmụọ ọjọọ. Obi dị m ụtọ na enwerela m onwe m n’aka ndị mmụọ ọjọọ otú ahụ otu nwa agbọghọ na-eje ozi si nwere onwe ya n’aka “mmụọ ọjọọ nke a na-ajụta ase” mgbe Pọl chụpụrụ mmụọ ọjọọ ahụ.—Ọrụ Ndịozi 16:16-18.
Obi tọrọ m ezigbo ụtọ na e mere mụ na mama m baptizim n’otu ụbọchị na Septemba n’afọ 1996, anyị aghọọ Ndịàmà Jehova. Mgbe e mechara m baptizm, m malitere ikwusa ozi ọma oge niile. M kwusakwara ozi ọma oge niile ruo ọtụtụ afọ.
Ugbu a m lụọla di. Aha di m bụ Silver. Anyị abụọ na-agbalịsi ike ka anyị kụziere nwa anyị eziokwu ndị dị na Baịbụl. Ụfọdụ ụmụnne m aghọọkwala Ndịàmà Jehova. Ọ bụ eziokwu na ọ na-ewute m na amaghị m Chineke kemgbe ọtụtụ afọ, obi dị m ezigbo ụtọ na ugbu a amatala m Chineke m na-efe.
^ par. 10 Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya, ma a naghịzi ebipụta ya.
^ par. 18 Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
M ji ikike ahụ gwọọ otu nwatakịrị oké ahụ́ ọkụ ji
Eziokwu m na-amụta malitere ịgbanwe ndụ m
Obi tọrọ m ụtọ na m matala onye ezi Chineke bụ!
Mgbe m gụchara akwụkwọ ghọọ pastọ
Ọ bụ Precious kụziiri m Baịbụl
Mgbe e mere mụ na mama m baptizim
Mgbe m na-ekwusa ozi ọma oge niile
Mụ na di m na nwa anyị nwaanyị na ọtụtụ ndị ikwu m ndị ghọrọ Ndịàmà Jehova
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ugbu A Amatala M Chineke M Na-efe